Mayelana NATHI - Chengdu Luxury Lighting Technology Co., Ltd.
Okuningi kusebenziseka kalula
I-Chengdu Luxury LightingI-Technology Co, Ltd. yasungulwa ngo-2011 futhi ineminyaka engaphezu kwengu-10 yomlando wokukhanyisa nesipiliyoni. Ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi yentuthuko eqhubekayo kanye nokuqanjwa kwezinto ezintsha, i-Luxury isihlakule ngokujulile izidingo zamakhasimende futhi yaqongelela ulwazi olunothile emikhiqizweni ebalulekile, okwenza imikhiqizo yethu iqine, ikhanye futhi isebenziseke kalula. Kubandakanya: I-Aluminium LED Linear ekhanyiswe ngaphambili, i-Aluminium LED Linear light ebuyiselwe emuva, i-Aluminium LED Linear ekhanyiswe phansi, i-Aluminium LED Linear ekhethekile efana ne-U, i-V eyenziwe nge-Aluminium LED Linear light, i-bevel ekhethekile ye-Aluminium LED Linear light kanye njalonjalo. Njengamanje, selibe ngumphakeli wezinkampani ezaziwayo zefenisha eChengdu (Vanke, Longhu, Longma Wood, Debei Furniture, njll.). Siyaqiniseka ukusiza amakhasimende emhlabeni wonke ukuhlinzeka ngezixazululo zokukhanya ze-Aluminium LED Linear eziwalungele.
Ibhizinisi eliphelele elihlanganisa i-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo yokukhanyisa. Kutholakala eChengdu, esifundazweni saseSichuan, eChina. It has a base ukukhiqizwa 800 square metres kanye nabasebenzi 100. Kunezintambo zokukhiqiza ezivuthiwe nezinhlelo zokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo, ukuqina nokuvikelwa kwemvelo. Ngokuthuthukiswa kwenkampani, sithuthukisa namandla athambile enkampani, futhi silwela ukwenza ukuthengisa kwethu kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, kanye nezinsizakalo zangemva kokuthengisa zisebenziseke kalula. Imikhiqizo yethu eyinhloko ikhabethe le-Aluminium LED Linear light, ukukhanyisa kwefenisha okwenziwe ngokwezifiso, kufaka phakathi iziteshi ze-aluminium alloy ezenziwe ngezifiso ukuzivumelanisa nezindawo ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza.
Gxila ekuxoxisaneni ngokuthuthukiswa komkhiqizo wokubambisana kanye nobunjiniyela bempahla amaphrojekthi wokuhlobisa amahle nezinkampani zefenisha ezenziwe ngezifiso.
Inkampani yethu ibekwe njengomhlinzeki wesixazululo somkhiqizo, izidingo zamakhasimende ezijulile, kusukela esakhiweni somkhiqizo, ukufakwa komkhiqizo, isiqinisekiso somkhiqizo, sinikeza izixazululo zethu zobuchwepheshe. Esikhundleni somhlinzeki womkhiqizo olula.Ukuqina kwethu kokukhanyisa kufakazelwa amakhasimende nesikhathi.
Inhloso: Ukuhlinzeka ngemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso nezinsizakalo zezinkampani zefenisha ezenziwe ngezifiso.
Kungani Khetha UKUPHATHA?
Isizathu 1: Imikhiqizo esiyithengisayo iyilokho kanye amakhasimende afuna ukukuthenga; iminyaka engaphezu kwengu-10 yokuhlangenwe nakho ekukhanyeni kwekhabethe lendawo, ukuze sibe nemikhakha eminingi yomkhiqizo, futhi amakhasimende angakhetha i-Aluminium LED Linear Light ebalungele. Njengokushumeka, ibha yokukhanya emincane ngokwedlulele, inkinobho yokuthinta, iswishi yeswishi yesandla, njll.
Isizathu 2: Xazulula izinkinga zamakhasimende; sinezinhlobo eziningi ze-Aluminium LED Linear Light eyenziwe ngezifiso ukuxazulula izinkinga zamakhasimende
Isizathu 3: Khetha umkhiqizo wakho, ikhasimende linobungozi obuphansi kunabo bonke; iminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni embonini yokukhanyisa, ithimba elihle kakhulu lomklami, nensizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva yizizathu eziyinhloko zamakhasimende okusikhetha
Khanyisa eduze kokukhanya kwemvelo, futhi wenze ukukhanya okutholwe ngamehlo kukhululeke futhi kube ngokoqobo.
Ayikho i-Pressure Drop
Sebenzisa ibhodi lesifunda le-FPC elinamacala amabili ukuqinisekisa ukuthi umucu wokukhanya ungathwala okwengeziwe manje futhi uxhume emgqeni wokukhanya omude.
Awukho Umehluko Wombala
Ngaphansi kokushisa kombala okufanayo, silawula umehluko wombala wobuhlalu be-LED ngaphakathi kwe-3sdcm ukuqinisekisa ukuthi awukho umehluko wombala phakathi kwamaqoqo ahlukahlukene we-Aluminium LED Linear Light ngokushisa kombala okufanayo.
Akukho Ukukhanya Okufile
Ukupakishwa kobuhlalu bokukhanya kwe-LED kudinga ukusetshenziswa okugcwele kwezintambo zegolide kanye nabakaki bethusi ukuqinisekisa ikhwalithi yobuhlalu bokukhanya be-LED, futhi inqubo ephezulu yokukhiqiza iqinisekisa ukuthi ubuhlalu bokukhanya buhlanganiswe kahle futhi buvimbela amalambu afile.
Ukubambezeleka Kokukhanya Okuphansi
Sisebenzisa amachips wekhwalithi ephezulu we-LED ngokusebenza kahle okukhanyayo, ukukhiqiza ukushisa okuphansi, ukubola okukhanyayo okuphansi, nokubola okukhanyayo okuphansi ukuqinisekisa impilo yenkonzo ende yamalambu e-LED.
Ukusebenza Kokukhanya Okuphezulu
Sidinga ama-chip e-LED ukuthi abe nokusebenza okukhanyayo okuphezulu. Ukusebenza okukhanyayo okuphezulu kuzonciphisa ukushisa kobuhlalu be-LED futhi kwenze izibani ze-LED zonge amandla amaningi.